Wararka - Waxsoosaarka deegaanka
Shirkadeenu waxay u hoggaansameysaa fikradda ah saaxiibtinimada deegaanka iyo ilaalinta kheyraadka. Dhawaan xaaladda ilaalinta deegaanka waa mid xun, shirkadeena ayaa si wanaagsan uga jawaabeysa waxayna fulisaa wax soo saarka ilaalinta deegaanka.
1. In la ciribtiro tas-hiilaadka duugoobay lana soo bandhigo qalab casri ah. Waxaan ka takhalusnaa tas-hiilaadka duugoobay waxaanna soo bandhignaa qalab casri ah xilliyada go'an si loo hagaajiyo wax-soo-saarka wax-soo-saarka, hoos u dhigista heerka duugga isla mar ahaantaana la ogaado eber wasakheynta iyo qiiqa yar ee wax soo saarka.
2. Diyaarso badeecadaha si aad ula kulanto taariikhda dhiibista lagu heshiiyey macaamiisha si firfircoon. U diyaari badeecadaha horay amarro joogto ah si loo hubiyo in qaybaha laga heli karo alaab-qeybiyeyaasha waqtiga loogu talagalay ka-baaraandeg dheeri ah iyo isu-imaatin, si loo hubiyo in alaabada macaamiisha la gaarsiiyo waqtigeeda.